တရုတ်ထိပ်တန်းအရည်အသွေး2ဘီးလက်ဘရိတ်ကလေးများသည် Scooter / push ထိပ်တန်းလိုလားသူကလေးဆိုင်ကယ်မော်ဒယ်သစ် / 2017 လက်နှိပ်ဓာတ်မီးဆိုင်ကလေးထိုင်ခုံထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများအတွက် | အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့စက်ဘီး
ထိပ်တန်းအရည်အသွေး2ဘီးလက်ဘရိတ်ကလေးများသည် Scooter / push pro လိုကလေးစုတ်တာကိုပုံစံအသစ် / 2017 လက်နှိပ်ဓာတ်မီးဆိုင်ကလေးထိုင်ခုံ
2 ဘီးလက်ဘရိတ်ကလေးတွေ Scooter ကန်
Stanless သံမဏိ, နိုင်လွန်, စစ
2 ဘီးလက်ဘရိတ်ကလေးများသည်ဆိုင်ကယ် / ကလေးဆိုင်ကယ် / ဆိုင်ကယ်ကလေးထိုင်ခုံဖြစ်သည်
တစ်နေ့လျှင် ၁၀၀၀၀ Piece / အပိုင်း2ဘီးလက်ဘရိတ်ကလေးများသည်စကူတာ / ကလေးဆိုင်ကယ် / ဆိုင်ကယ်ကလေး
1piece / box,4/ 6box / carton၊ အရည်အသွေးအကောင်းဆုံးဘီး ၂ ဘီးလက်ကိုင်ကလေးများသည်စကူတာ / ကလေးငယ်များအတွက်အကောင်းဆုံးသောကလေးဆိုင်ကယ်မော်ဒယ် / 2017 လက်နှိပ်ဓာတ်မီးရှိသည့်ကလေးထိုင်ခုံ
အရေအတွက် (အပိုင်းအစများ) 1 - 500 > 500
အီးအက်စ်တီ။ အချိန် (နေ့များ) 16 ညှိနှိုင်းခံရဖို့
ပုံး အရွယ်အစား ပုံးတစ်လုံး (pcs) / kg အရေအတွက် / ပုံး အရေအတွက်/ PCs အရေအတွက် / ကီလိုဂရမ်
၂၀FT (၂၈ စင်တီမီတာ)
65 * 25 * 25စင်တီမီတာ 20 pcs / 19kg 729 ပုံး 14580pcs 13851 ကီလိုဂရမ်
65 * 25 * 35စင်တီမီတာ 10pcs / 9kg 567 ပုံး 5670 pcs 5103 ကီလိုဂရမ်
65 * 25 * 30စင်တီမီတာ 60pcs / 11kg 648 ပုံး 38880pcs 7128kg
73 * 40 * 25cm 10pcs / 11kg 432 ပုံး 4320 pcs 4752 ကီလိုဂရမ်
43 * 33 * 34cm 40pcs / 10kg 637 ပုံး 25480pcs 6370kg
စည်းကမ်းချက်များ & ဝန်ဆောင်မှု
ပို့ဆောင်ချိန် 20-35ရက်ပေါင်း လက်ခံရရှိပြီးနောက်ing သိုက်၏ 30% ၏ငွေပေးချေမှု။
ငွေပေးချေမှု -Iရက်တွေ L / C မျက်မှောက်မှာ.
-30% T / T ကြိုတင်မဲအတွက်နှင့် 70 မိတ္တူဆန့်ကျင်ချိန်ခွင်လျှာ ခ / လ။
-D / P မျက်မှောက်မှာ.
ထုပ်ပိုး -တစ်စုံ ပုံမှန်ပို့ကုန်ပုံးတစ်ခဲလျှင်.
-85% SKD, ၅၀% SKD နှင့် CKD.
တုံ့ပြန်ချက် သင်ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ဝင်စားပါကသင့်အားအကောင်းမြင်တုံ့ပြန်မှုများပေးရန်သင့်အားစိတ်ရင်းမှန်ဖြင့်ဖိတ်ခေါ်ပါသည် pလှံတံucts. မင်းရှိရင် မဆို ကျေးဇူးပြု၍ အချိန်မရွေးဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ကျနော်တို့တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးတုံ့ပြန်ပါလိမ့်မယ်။
ရောင်းပြီးနောက် မည်သည့်မေးခွန်းမဆိုs ထုတ်လုပ်မှု၏, ငါ့ကိုအီးမေးလ်သို့မဟုတ်ဖုန်းဖြင့်တိုက်ရိုက်အသိပေးပါ. Wအီးသည်ဤပြwithနာများကိုအချိန်မီကိုင်တွယ်နိုင်သည်။Wအီးပြီးနောက် sal အပေါ်အာရုံစူးစိုက်င။ Welcome ကျွန်တော်တို့ကိုမဆိုမှတ်ချက်များပေးပို့ပါ။
ရှေ့သို့ အန္တရာယ်ကင်းသောကလေးများသည်ကလေးများအတွက်စက်များ / ကလေးများအတွက်ပလာစမာကားဈေးနှုန်းကိုစက်ရုံ / ကလေးများအတွက်လှည့်စားသည်
နောက်တစ်ခု: ပူပြင်းသောရောင်းဝယ်မှုအနက်ရောင်နှင့်အနီရောင်ကန်သောဆိုင်ကယ် / ဘီးအသေးစားချိန်ခွင် Scooter နှင့် PU ဘီး / ၃ ဘီးကလေးဆိုင်ကယ်တို့ဖြစ်သည်